Bere a Wo Hokafo Aka Baabi​—Awerɛkyekye ne Anidaso | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
BIBLE ka no pefee sɛ: Okunu “nnɔ ne yere sɛ ne ho.” Ɛsɛ sɛ ɔbea nso ‘nya obu kɛse ma ne kunu.’ Wɔn nyinaa ka bom yɛ “ɔhonam koro.” (Efe. 5:33; Gen. 2:23, 24) Sɛ nnipa baanu ware a, ebedu baabi no sɛ obiako anhu ne yɔnko a, ontumi ntena. Saa bere no nyinaa na wɔn dɔ nyin ara na ɛrenyin. Nea yɛreka yi akɔyɛ sɛ nnua abien a esi faako renyin. Wobɛhwɛ na biako nhin abobare biako deɛ ho. Saa na ɛte wɔ aware mu. Sɛ awarefo dodɔ wɔn ho a, wuhu sɛ mframa mfa wɔn ntam koraa.
Na sɛ ɔbarima anaa ɔbea no wu ɛ? Ɛbɛyɛ te sɛ nea wɔde biribi awae biako afi ne yɔnko ho. Ɛba saa a, sɛ ɛnyɛ awerɛhow ne ankonamyɛ na okunafo no refa mu a, na ɛyɛ abufuw ne afobu. Daniella ne ne kunu tenaa mfe 58, na saa bere no nyinaa ohyiaa awarefo pii a wɔn ahokafo aka baabi. * Nanso bere a ne kunu wui no, ɔkae sɛ: “Ebi anto me a, anka minnim sɛ ɛyɛ yaw saa. Ɛntoo wo a, worente ase da.”
ƐTƆ DA A, ASƐ ƐYAW NO ABƆ ATENASEƐ
Ebinom ka sɛ biribiara nni hɔ a ebetumi atwa wo nsono mu asen wo hokafo wuo. Nnipa pii a wɔn adɔfo awu gye saa asɛm yi tom. Millie ne ne kunu tenaa mfe 25. Ɔbarima no wui akyɛ paa, nanso ɛnnɛ ne nnɛ nyinaa ɔka sɛ: “Asɛ minni nan gyina so koraa.”
Susan deɛ, ade a na ɔnte ase koraa ne sɛ obi kunu awu na ne yere besu mfe pii. Afei da koro ne kunu a ɔne no atena mfe 38 wui. Yɛreka yi mfe 20 atwam, nanso ɔka sɛ, “Da koro mpo nni hɔ a memmɔ ne din.” Anigyina nti, ɔtaa tew nisu.
Bible ma yehu sɛ, sɛ obi hokafo ka nkyene gu a, ebubu no, na ɛyɛ den sɛ ebefi ne tirim. Bere a Sara wui no, ne kunu Abraham “baa ɔdan no mu begyam Sara na osuu no.” (Gen. 23:1, 2) Ná Abraham gye owusɔre di, nanso bere a ne dɔfo Sara wui no, awerɛhow menee no. (Heb. 11:17-19) Yakob nso, ne yere Rahel wuo amfi n’adwenem da. Wohwɛ sɛnea ɔkaa ne yere ho asɛm kyerɛɛ ne mma a, wuhu sɛ na ɔdɔ no paa.—Gen. 44:27; 48:7.
Yɛhwɛ Bible mu nsɛm a yɛaka yi a, dɛn na yesua fi mu? Obi kunu anaa ne yere wu a, odi awerɛhow kyɛ paa. Sɛ obi tew nisu saa a, ɛnsɛ sɛ yenya adwene sɛ ne gyidi ayɛ mmerɛw. Mmom ɛsɛ sɛ yehu sɛ wahwere ade kɛse, na sɛ ɛyɛ yɛn a, anka ebia saa ara na yɛbɛyɛ. Ɛsɛ sɛ n’asɛm yɛ yɛn mmɔbɔ na yekurakura ne mu saa ara.
MMA ƆKYENA ASƐM NTEETEE WO
Sɛ obi kunu anaa ne yere wu a, ɛnsan mfa no nkɔ ne sigyaberem prɛko pɛ. Sɛ ɔbarima ne ne yere tena kyɛ a, ohu ɔbea no yiye—onim sɛnea ɔbɛkorɔkorɔ ɔbea no na wɔakyekye ne werɛ. Sɛ ɔbarima no wu a, ɔde ne nyinaa kɔ. Enti afei ɔbea no bɛyɛ dɛn? Ɔbea nso ne ne kunu tena kyɛ a, ohu sɛnea ɔbɛma ɔbarima no ani agye na ne koma atɔ ne yam. Ebia yɛreka yi ɔbea no taa de ne nsa fefa ɔbarima no ho bɔ no sɛmɔdɛ, na ɔyɛ nea ɔpɛ biara ma no. Nanso ɔbea no wu a, na eyi nyinaa to atwa. Ɔbarima no behu sɛ wahwere ade paa. Enti sɛ obi kunu anaa ne yere wu a, na ɛyɛ no sɛ ne wiase nyinaa aba awiei. Bible mu nsɛm bɛn na ɛbɛboa wɔn a wɔte saa ma wɔanya akomatɔyam ne asomdwoe?
Adekyee biara Onyankopɔn bɛma wo biribi atew w’awerɛhow so
Bible ka sɛ: “Munnnwinnwen ɔkyena ho, na ɔkyena ankasa benya ne dadwen. Da biara mu bɔne ankasa dɔɔso ma da no.” (Mat. 6:34) Yesu asɛm yi fa yɛn asetenade ho, nanso aboa nnipa pii a wɔn adɔfo awuwu ma wɔanya awerɛkyekye. Onua bi a yɛfrɛ no Charles yere wui, na asram bi akyi no, ɔkae sɛ: “Midwen me yere Monique ho araa ma meda a menna, na ɛtɔ da mpo a na ɛreyɛ afa me tirim. Nanso mahu sɛ saa ara na ɛte; nkakrankakra ɛyaw no so bɛtew.”
Ampa-ne-ampa ara “nkakrankakra” Charles faa mu. Dɛn na ɛboaa no? Ɔkae sɛ: “Yehowa mmoa so, minnwen ɔkyena ho nhaw me ho; ade kye biara a mehwɛ nea metumi ayɛ.” Eyi nti awerɛhow ammunkam Charles so. N’awerɛhow antu anyera da koro pɛ, nanso amfa no dommum. Sɛ wo hokafo aka baabi a, mma nneɛma mmunkam wo so; ade kye biara a hwɛ nea wubetumi ayɛ de atew yaw no so. Ade nkyee a, wunnim nea wubenya.
Onyankopɔn ammɔ owuo anka nnipa ho, mmom ɛka “Ɔbonsam nnwuma” ho. (1 Yoh. 3:8; Rom. 6:23) Satan de owuo ne owuo ho hu afa nnipa pii dommum, na wonni anidaso biara. (Heb. 2:14, 15) Nea Satan pɛ ara ne sɛ yɛn abam bebu na yɛn anidaso asa. Ɔpɛ sɛ yenya adwene mpo sɛ Onyankopɔn wiase foforo no mu koraa yɛn ani rennye ahe biara. Enti nea ɛma okunafo di yaw nyinaa fi Adam bɔne ne Satan atuatew. (Rom. 5:12) Yehowa beyi nea Satan akɔfa aba nyinaa afi hɔ na wayi owuo tirimɔdenfo a Satan de di nnipa nya no afi hɔ. Ɛba saa a, obiara rensuro owuo bio.
Sɛ wonyan awufo san ba wiase foforo no mu a, nneɛma pii bɛsesa. Wo deɛ, yɛnhwɛ yɛn awofo, yɛn nananom ne abusuafo foforo a wɔanyan wɔn abɛka wɔn mma ne wɔn mmanana ho. Saa bere no, wɔn nyinaa bɛyɛ pɛ na nkwakoraabɔ ne mmerewabɔ befi hɔ. Ebia sɛnea mmerante ne mmabaa hu wɔn nananom nnɛ bɛsesa saa bere no. Wunnye ntom sɛ nsakrae a ɛte saa nyinaa bɛma nnipa asetena adi mũ?
Ebia yɛwɔ owusɔre ho nsɛmmisa pii wɔ yɛn adwenem. Yɛmfa no sɛ obi aware mprenu anaa mprɛnsa ma ne kununom nyinaa awuwu. Sɛ wɔsan ba nkwa mu a, dɛn na ebesi? Sadukifo no bisaa Yesu asɛm a ɛte saa. Ɔbea bi waree ma ne kunu a odi kan wui, nea ɔto so abien nso wui. Ɛkɔɔ so saa ara kosi sɛ nea ɔto so ason nso wui. (Luka 20:27-33) Ɛnde, wonyan wɔn nyinaa ba nkwa mu a, obiara behu ne yɔnko sɛn? Asɛm no ara ne sɛ yennim, na ɛho nhia sɛ yɛbɛkeka ho nsɛm biara anaa yebedwen ho ahaw yɛn ho. Saa bere yi deɛ, nea ehia ara ne sɛ yɛde yɛn ho bɛto Onyankopɔn so. Nanso ade biako bi wɔ hɔ a yebetumi asi no pi. Ɛne sɛ nea Yehowa bɛyɛ daakye biara bɛyɛ papa, ɛbɛyɛ biribi a yɛn ani begye ho, na ɛrenyɛ nea ɛbɛbɔ yɛn hu.
OWUSƆRE KYEKYE YƐN WERƐ
Nkyerɛkyerɛ biako a emu da hɔ paa wɔ Bible mu ne sɛ yɛn adɔfo a wɔawuwu bɛsan aba nkwa mu bio. Wohwɛ Bible mu a, wuhu sɛ tete no wonyanee awufo, na ɛno hyɛ yɛn anidaso mu kena sɛ “wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa bɛte [Yesu] nne na wɔafi adi.” (Yoh. 5:28, 29) Wo deɛ hwɛ sɛ ateasefo rema wɔn adɔfo a wɔanyan wɔn no akwaaba! Hwɛ sɛnea ɛhɔ bɛyɛ anigye afa! Sɛ yɛn a yɛanya hokwan rema awufo akwaaba ani begye a, ɛnde wɔn a wɔanyan wɔn no deɛ, yɛnna nka mpo!
Wo deɛ hwɛ sɛ nnipa mpempem anyan aba nkwa mu bio; hwɛ ahosɛpɛw ne ahurusidi a ɛbɛkɔ so wɔ asase so saa bere no! (Mar. 5:39-42; Adi. 20:13) Sɛ yɛtena ase hwɛ anwonwade kɛse a ɛrebesi yi a, ɛsɛ sɛ ɛma obiara a ne dɔfo afi mu koma tɔ ne yam.
Sɛ wonyan awufo a, adɛn nti na yebetumi aka sɛ biribiara nni hɔ a ebetumi ama obi atew nisu bio? Efisɛ nkɔmhyɛ a ɛwɔ Yesaia 25:8 ka sɛ Yehowa ‘bɛmene owu akosi daa.’ Eyi kyerɛ sɛ owu ne ateetee ne awerɛhow a ɛde ba nyinaa betu ayera. Yesaia nkɔmhyɛ no toa so sɛ: “Awurade Tumfoɔ Yehowa bɛpopa obiara aniwam nusu.” Enti sɛ nnɛ wo kunu anaa wo yere awu ma woretew nisu a, owusɔre akyi ne nyinaa to betwa; worensu bio.
Onipa biara nni hɔ a obetumi ahu biribiara a Onyankopɔn bɛyɛ wɔ wiase foforo no mu. Yehowa ka sɛ: “Sɛnea ɔsoro korɔn sen asase no, saa ara na m’akwan korɔn sen mo akwan, na m’adwene korɔn sen mo adwene.” (Yes. 55:9) Sɛ yɛwɔ ahotoso paa sɛ owusɔre a Yesu kaa ho asɛm no bɛba a, ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ Yehowa mu awerɛhyem te sɛ Abraham. Enti ɛnnɛ, ade a ehia paa ne sɛ Kristoni biara bɛyɛ nea Onyankopɔn pɛ. Yɛyɛ saa a, obebu yɛne wɔn a wobenyan wɔn aba nkwa mu nyinaa sɛ nnipa a “wɔfata sɛ wonya saa wiase nhyehyɛe no.”—Luka 20:35.
NEA ƐMA YENYA ANIDASO
Mmfa daakye nsɛm nhaw wo ho, na mmom nya anidaso. Nnipa ani so deɛ, ɛte sɛ nea anidaso biara nni hɔ, nanso Yehowa de biribi pa bi ahyɛ yɛn bɔ. Ɛwom, yennim kwan pɔtee a Yehowa bɛfa so ama yɛn nsa aka deɛ, nanso yenim sɛ sɛnea ɛte biara ɔbɛma yɛn nsa aka yɛn koma so ade. Ɔsomfo Paulo kyerɛwee sɛ: “Anidaso a wohu nyɛ anidaso, na sɛ obi hu biribi a, obetumi anya mu anidaso? Nanso sɛ yɛn ani da nea yenhu so a, yɛkɔ so ara de boasetɔ twɛn.” (Rom. 8:24, 25) Sɛ wugye di paa sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ bɛbam a, ɛbɛboa wo ma wode boasetɔ atwɛn. Sɛ wumia w’ani twɛn a, Yehowa rennyaw wo mu; “ɔbɛma wo nea wo koma pɛ.” Nokwasɛm ne sɛ ɔbɛma ‘ateasefo nyinaa anya nea wɔpɛ.’—Dw. 37:4; 145:16; Luka 21:19.
Nya awerɛhyem sɛ Yehowa bɛma ne bɔhyɛ abam ma yɛn ani agye
Bere a Yesu wuo repenpɛn so no, awerɛhow ne akomatu hyɛɛ n’asomafo no mã. Enti Yesu de asɛm yi kyekyee wɔn werɛ: “Mommma mo koma nntu. Munnya Onyankopɔn mu gyidi, munnya me nso me mu gyidi.” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Merennyaw mo nnyanka. Mereba mo nkyɛn.” (Yoh. 14:1-4, 18, 27) Ná Yesu asɛm yi bɛhyɛ n’akyidifo a wɔasra wɔn nyinaa mpamden ma wɔanya anidaso ne boasetɔ. Wɔn a wɔrehwɛ kwan sɛ wobehyia wɔn adɔfo a wɔawuwu nso ɛ? Ɛsɛ sɛ wɔkɔ so ara nya anidaso; enni sɛ wɔn abam bu. Yehowa ne ne Ba no ka wɔn ho. Ɛrenkyɛ wubehyia w’adɔfo na woayɛ wɔn awaawaa atuu!
^ nky. 3 Ɛnyɛ wɔn din ankasa ne no.
Kyekye Wɔn a Ade Atɔ Wɔn Ani Werɛ
Sɛ Kristoni bi kunu anaa ne yere wu a, mfiase no nnipa pii kɔ ne fie kɔkyekye ne werɛ boa no wɔ akwan horow so. Sɛ abusuafo ne nnamfo kɔboa okunafo bi saa a, n’ani sɔ paa. Nanso awerɛhow no deɛ, ɛrenkɔ prɛko pɛ, enti obehia awerɛkyekye ne mmoa bere tenten. Bible ka sɛ: “Ɔyɔnko berɛbo dɔ bere nyinaa; ɔyɛ onua a wɔwoo no maa ahohia da.”—Mmeb. 17:17.
Sɛ wokɔ obi a ne dɔfo awu hɔ a, asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ no? Bible ma yɛn ho adwene bi. Ɛka sɛ: “Mo nyinaa nyɛ adwenkoro, na munnya tema, onuadɔ, ayamhyehye.” (1 Pet. 3:8) Sɛ obi biribi wu saa a, mfiase no etumi bɔ no yare mpo. Enti nsɛm bi wɔ hɔ a, ɛnyɛ papa sɛ yɛka anaa yebisa. Ebi ne: “Seesei deɛ sɛ biribiara rekɔ yiye?” Ebia nea biribi atɔ n’ani no bɛka wɔ ne tirim sɛ, ‘Wo deɛ wunnim, ɛbɛyɛ dɛn na biribiara akɔ yiye ama me seesei?’ Enti ɛbɛyɛ papa sɛ yɛka biribi a ɛhyɛ nkuran te sɛ, “M’ani agye sɛ mahu wo,” anaasɛ “Mihu wo wɔ adesua ase saa a, ɛhyɛ me nkuran paa.”
Wubetumi ato nsa afrɛ okunafo bi ne no adidi anaa mpo wubetumi ne no atu mpase. Bere a Marcos yere fii mu no, na ne nnamfo bɛsra no kyekye ne werɛ. Nkɔmmɔ bɛn na na wɔbɔ? Ɔkae sɛ: “Yɛanka me haw ho asɛm kɛse na mmom biribiara a ɛhyɛ nkuran.” Nina nso yɛ ɔbea kunafo, na ɔkae sɛ: “Ná me nnamfonom nim nsɛm a ɛsɛ sɛ wɔka ne bere a ɛsɛ sɛ wɔka no. Ɛnyɛ daa na wɔkasa; ɛtɔ da bi a wɔbɛtena me nkyɛn kɛkɛ.”
Sɛ okunafo no pɛ sɛ ɔka ne hokafo wu ho asɛm a, yɛ aso tie nea ɔwɔ ka biara. Mmisabisa nsɛm a ɛho nhia; mfeefee nsɛm mu. Afei nso mmu no atɛn. Ɛho nhia sɛ wokyerɛ no sɛnea obegyam ne hokafo anaa bere tenten a ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa. Sɛ wuhu sɛ okunafo no pɛ sɛ onya bere kakra home anaa odwen ne ho a, mma ɛnhaw wo. Wubetumi akɔ na bere foforo waba. Kɔ so ara kyerɛ wo dɔ.—Yoh. 13:34, 35.
Wowɔ Nsɛmmisa Bi?
Sɛ obi dwinnwen kwan a Yehowa bɛfa so ama ne bɔhyɛ abam ho a, ɛnyɛ bɔne. Bere a Onyankopɔn hyɛɛ Abraham bɔ sɛ ɔbɛma wanya ba no, na ɔtaa dwinnwen ho. Yehowa ma ohui sɛ ɛsɛ sɛ onya ntoboase. Nanso Abraham amma n’abam ammu.—Gen. 15:2-5; Heb. 6:10-15.
Bere a Yakob tee sɛ Yosef awu no, osuu no papaapa. Mfe pii twaam nanso na ɔda so ara su no. Nanso na Yehowa de nhyira bi ato hɔ retwɛn Yakob, biribi a ɔnna nnwen ho koraa. Akyiri yi Yakob ne Yosef san hyiae na ohuu ne mmanana mpo. Yakob kae sɛ: “Na minnim da sɛ mehu w’anim, nanso hwɛ sɛ Onyankopɔn ama mahu wo mma mpo aka wo ho.”—Gen. 37:33-35; 48:11.
Dɛn na yebetumi asua afi Bible mu asɛm yi mu? Nea edi kan, nya awerɛhyem sɛ biribiara nso ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn no yɛ; ɔbɛma n’apɛde ayɛ hɔ. Nea ɛto so abien, sɛ yɛbɔ mpae na yɛyere yɛn ho yɛ nea Yehowa pɛ a, ɔbɛhwɛ yɛn so na daakye nea yɛn koma pɛ biara, ɔbɛyɛ ama yɛn. Paulo kyerɛwee sɛ: “Nea otumi yɛ ade ma ɛkyɛn nea yɛsrɛ anaa yesusuw koraa sɛnea ne tumi a ɛyɛ adwuma yɛn mu te no, ɔno na anuonyam nka no daa daa wɔ awo ntoatoaso nyinaa mu denam asafo no ne Kristo Yesu so. Amen.”—Efe. 3:20, 21.
Biribiara Ntumi “Ntetew Yɛne Onyankopɔn Dɔ Mu”
Po atosɛm a ɛne sɛ wo so nni mfaso anaasɛ Onyankopɔn mfa wo nyɛ hwee no.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 2013
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 2013